တို့ရွာထဲက များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တို့ရွာထဲက များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ	10
Posted by နွေဦး on Feb 25, 2016 in Creative Writing | 10 comments
ခုမှဘဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်ခါစမို့ ….
အရင်ကလဲ စာမေးပွဲ မေးခွန်းတွေမှာ မှားတတ်ကြတာဘဲ..။
မေးခွန်းမှားနေရင် တာဝန်ခံ ဆရာ တွေက စာမေးပွဲ အခန်းထဲ ဝင် အမှားကို တာဝန်ခံပြီး ပြင်ပေးကြတယ်..။
ဘယ်လောက် မှားမှား မေးခွန်းထုတ်တဲ့ ဆရာ ကိုယ်တိုင် မသိသေးခင်မှာဘဲ နီးစပ်ရာ ဆရာတွေက တာဝန်ယူ ပြီးပြင်ပေးကြတယ်..။
ကောင်းတဲ့ တာဝန်ယူမှုပေါ့ဗျာ.. ။
ခုကျမှ ဘာလို့ ဟိုလူ့ အပြစ်ပြော ဒီလူ့ အပြစ်ပြော.. ဘာလို့ ဖြစ်ရတာလဲ..။
အကျင့် ဖြစ်သွား ပြီလေ..
တာဝန်မယူရဲ တာဝန်မခံရဲ အောင် နှိပ်ကွပ် ခံကြရတော့ သာမန်ကိစ္စတွေကိုလဲ ဟိုလူ့ အပြစ်ပြော ဒီလူ့ အပြစ်ပြော လုပ်ကြတာပေါ့..
လွယ်လွယ် ဖြေရှင်းလို့ရမဲ့ ကိစ္စတွေက အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဘွယ် ဖြစ်ရတယ်..။
ဒါတွေက ငယ်တဲ့ အမှု ကြီးစေ ဆိုတာလေ.. အဓိက က တာဝန်မခံ ကြလို့လေ…
…. ကြီးတဲ့ အမှုတွေ ငယ်ရာက ပျောက် သွားကြတာတွေ ပြောမဆုံးပေါ့..
လက်သယ် မပေါ် ပိုင်ရှင် မဲ့ ဖြစ်သွားပြီး ပျောက်သွား ကြတာတွေ ..
အဲဒါတွေက အမည် မဖေါ်လိုသူ တာဝန်ခံကြီးတွေ တာဝန်ခံ ကြလို့ ဆိုတာ…
အဲဒီ တာဝန်ခံတဲ့ သူတွေကို တာဝန်ယူကြတဲ့ သူတွေက ဘာအားကိုး ရှိလို့ …
အားကိုးကြီးကြီးရှိသူတွေက လူမိုက် ကြီးကြီး လုပ်ကြတယ်..
အားကိုးသေးသေး ရှိသူတွေက လဲ လူမိုက် ကြီးကြီးဘဲ လုပ်ကြတယ်..
တကယ်တော့ ခုချိန်မှာ အားကိုး ရှိသူတွေက လူမိုက်လုပ်နေကြတာ.. ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် နောက်ကွယ်က အားကိုးနဲ့ လူမိုက်လုပ် ရမ်းကားနေကြတာ..
ငါ့ ဘာကောင် မှတ်လဲ လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ နောက်ကွယ်က သူ့အားကိုး ရှိနေတယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်နေပြီ..
ဒီလို လူရမ်းကားတွေရဲ့ အားကိုးရာ က ဘယ်သူလဲ..
အဲလိုအားကိုးရတဲ့သူက ဘာရှိလို့လဲ.. သူက စေတလုံးပိုင်ရှင်လား.. ဟိုလူတွေ လုပ်ချင်ရာလုပ် ရှင်းပေးနိုင်လောက်အောင် သူမှာ ဘာတွေရှိပါလိမ့်…
သူ့မှာ အာဏာ ရှိတယ်..
ရှိတဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်..
ဒီအာဏာနဲ့ ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာနေ နေတယ်..
ရပ်ကွက်ထဲက ဘာညာတွေက အရင် လို နောက်ကွယ်က တာဝန်ခံပေးမဲ့သူ မရှိတော့ရင်….?
ရမ်းကားချင်တိုင်း ရမ်းကားပြီး အဘရေ ကယ်ပါအုံး လို့ လုပ်လို့ မရတော့ရင်…? ….
ဘုရားရှိခိုးပြီး မေတ္တာ ပို့သလို အဆင့်ဆင့် ပေါ့ဗျာ..
မြို့နယ် ထဲက များ သတ္တာ…
အဲလို သတ္တဝါ အဆင့်ဆင့်က ဘယ်သူ့အားကိုးနဲ့ ဘယ်လို ရမ်းကား လို့ မရတော့ရင်
ခင်ဇော် says: အားကိုးကြီးကြီးရှိသူတွေက လူမိုက် ကြီးကြီး လုပ်ကြတယ်..
ခုချိန်မှာ အားကိုး ရှိသူတွေက လူမိုက်လုပ်နေကြတာ..
ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် နောက်ကွယ်က အားကိုးနဲ့
ငါ့ ဘာကောင် မှတ်လဲ လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့
နောက်ကွယ်က သူ့အားကိုး ရှိနေတယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်နေပြီ..
သများကို စောင်းပြောတာလား ဥဥနွေဥ
နွေဦး says: လူမိုက် တွေ အရေခွံ ချွတ်ခံရတော့မယ်..
ရွာထဲဝင်ရင် အဲဒါ စိတ်ညစ်တယ်..
ခင်ဇော် says: တညားက ဖတ်လို့ရတယ်။
Swal Taw Ywet says: စလုံးလေဆိပ်မှာ
Thint Aye Yeik says: သူကြီး ဖောင့်တွေကိစ္စ နည်းနည်း ကလိထားတယ်…
တချို့… ပုံမှန် ဖတ်မရ ဖြစ်နေကြတယ်ထင့်….
ရွာထဲ..နဂိုကတည်းကမှ တစ်နေ့ အယောက် ငါးဆယ်လောက်ပဲ ဝင်တာ…..
ဖတ်မရ ပြု မရဆိုရင် ဝင်ရတာ စိတ်ပျက်ပြီး ငါးယောက်တောင် ကျန်ပါ့မလား…. ဒီပိုစ်ဖတ်ပြီး ဆက်စပ်တွေးမိသွားတာက…
naywoon ni says: @က​နွေဦး ​ရေ ပထ၀ီ ​မေးခွန်းမှားတဲ့ ကိစ္စက သိသိကြီးနဲ့ အစိုးရကို ​ဆော်​လိုက်​သလားလို့​တောင်​ ​တွေးမိရဲ့ ။ ဘာလို့ဆို မှားမှန်းသိရင်​ ပြင်​ခိုင်းဖို့ ဆက်​သွယ်​​ရေး​တွေ လွယ်​ကူ​နေမင့်​ဟာ ။ နှုတ်​က အမှားပြင်​​ပေးပြီး ​မေးခွန်းစာရွက်​​ပေါ်က အမှားကို အတန်း​စောင့်​ ဆရာ​တွေကို အခန်း​စောင့်​​နေရင်း တစ်​ခုခုနဲ့ ဖျက်​ပစ်​ဖို့ ခိုင်းလိုက်​ / ညွှန်​ကြားလိုက်​လို့ရရဲ့သားနဲ့ ဟာ ။ သက်​ဆိုင်​သူက အမှားအတိုင်း အပြင်​ကို ​ရောက်​သွား​စေ့ချင်​ပုံရသဗျ ။
” တရုပ်​ပြည်​သူ့ သမတ မြန်​မာနိုင်​ငံသူ/ သား အားလုံး ချမ်းသာကိုယ်​စိတ်​မြဲ ပါ​ဇေဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 996
နွေဦး says: ဆောရီး အဘနီရေ.. စာက ဘာမှ ဖတ်မရဘူးလေ..
ဂေဇက်ကို စိတ်ပျက်တာ ဒါလဲပါတယ်..
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဟေ့
တကိုတော် မျောက်မိုက် အူးမြောက်မြောက်ဆိုတာ
kai says: မြန်မာတွေ ကမ္ဘာမှာအပို့ဆုံးက.. မေတ္တာတွေဖြစ်မယ်…
ပို့တာများလို့လားမသိ… ကမ္ဘာမှာ အကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်က.. မြန်မာပြည်မှာ…
ဆက်ပို့.. ဆက်ပို့.. ။ “k:
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: သာဓု..သာဓု..သာဓု